Ọdọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Nnukwu ọdọ mmiri dị n’ụwa
Mgbe anyị na-ekwu maka ọdọ mmiri, anyị na-ezo aka na mmiri na-adịgide adịgide nke a na-etinye n'ime nkụda mmụọ nke dị n'ọhịa. Enwere ike ịda mba ndị a site na mmejọ ala na site na orogenesis. Ha nwekwara ike ime n'ihi nchịkọta nke moraines glacial ma ọ bụ ọtụtụ snow snow. Taa, anyị ewetara gị ndepụta nke ọdọ mmiri kasị ukwuu n'ụwa.
Anyị ga-agwa gị nke bụ ọdọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa na ihe bụ isi njirimara ha.
1 Oke Osimiri Caspian
2 Ọdọ mmiri dị elu
3 Ọdọ Victoria
4 Ọdọ Huron
5 Ọdọ mmiri Michigan
6 Ọdọ mmiri Baikal
7 Ọdọ Tanganyika
Ọdọ nwere ike ịnwe mmiri dị mma na mmiri nnu. Mgbube nke ụdị ọdọ mmiri ọ bụla bụ ihe na - ekpebi njirimara na ụdị mmiri ọ ga - edobe. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka Osimiri Caspian. Ọ bụ ogologo nwere mgbatị dị otú ahụ na a na-ewere ya dị ka oké osimiri. O nwere mmiri brack na di n’agbata Europe na Eshia. Akaụntụ na omimi nke 371.000 km2 na nkezi omimi nke mita 170.
Aha Caspian Oké Osimiri bụ n'ihi Caspian. Ọ bụ aha obodo oge ochie nke mepere na ndịda ọdịda anyanwụ nke ọdọ mmiri ahụ. O nwere otutu ahihia na umu anumanu ma juputa na sturgeons na akàrà. Na nwute, ọ bụ oke osimiri nwere ọtụtụ esemokwu dị n'etiti mba ebe ọ nwekwara akụ dị n'ime ala dịka mmanụ na gas na-ebute nsogbu na-aga n'ihu. Waterskụ azụ na mmiri mba ụwa na-ebute nsogbu, n’ihi na site n’otu ohere, amabeghị onye na-ahụ maka njikwa ya.
Akụkụ mgbago ugwu nke ọdọ mmiri ahụ na-ajụkarị oyi n'oge ọnwa oyi ma jiri ya na-agba ọsọ ụfọdụ ski. Nwere ike ịsị na ọ bụ ice nnu dị nro nke na-anaghị ahụkarị ugwu ọ bụla.
Ọdọ mmiri dị elu
Ọ bụ otu n'ime 5 Osimiri Ukwu nke North America. Ọ dị n’etiti Amerịka na Kanada. O nwere mpaghara nke 82.000 km2, ịbụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa. O nwere oke mmiri a n'ihi na e nwere ihe karịrị osimiri 200 na-asọba n'ime ya ma na-aga n'ihu na-azụ ya.
Aha a bụ Lake Superior bụ n'eziokwu na ndị Bekee tinyere ya n'oge nyocha na 1760. Ọ bụ ọdọ mmiri nwere oke mmiri na nnukwu mmiri ha chọpụtara na ndụ ha. Ogologo mmiri nke mmiri dị na ogo 7 n'afọ niile. Oge oyi n’ọdọ mmiri a anaghị ajụ ezigbo oyi ma oge ọkọchị na-ajụ oyi.
Nnukwu ọdọ a dị n'akụkụ etiti ọwụwa anyanwụ Africa. Ndị Tanzania, Kenya na Uganda gbara ya gburugburu. Ogologo ya bụ 69.482 km2, ebe a na-ewere ya ọdọ mmiri nke abụọ kachasị elu na mbara ala, mgbe Lake Superior. Osimiri Kagera bụ ụtụ kasị ukwuu nke na-azụ ya mgbe niile. Ogbu mmiri ahụ dị mita 82 ebe ọ bụ na ọ dị n'elu ntakịrị nkụda mmụọ. Ogologo omimi bụ mita 40 ebe 82m bụ nke kachasị na epicent nke nsogbu ịda mbà.
E nwere ụfọdụ nsogbu gburugburu ebe obibi na-akpata mkpochapụ nke ụdị azụ dị iche iche n'ihi ịkarị oke. Hyacinth mmiri bụ otu n'ime ahịhịa ndị na-asọba n’ọdọ mmiri ahụ ma na-eme ya nsi. Ihe ọzọ kpatara ogo mmiri a ji emebi bụ site n'ọtụtụ nsị anụ ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọ bụ ọzọ na Great Lakes nke North America. Ọ bụ nke abụọ kachasị ukwuu na ọdọ mmiri 5 dị n'etiti United States na Canada. Osimiri a dị n'akụkụ Ontario na Michigan n'akụkụ ọdịda anyanwụ, nke ọzọ bụ Osimiri Ukwu. Ogologo omimi ya bụ mita 59 na nke kachasị bụ mita 229. Ọ bụ otu n'ime ọdọ mmiri ụwa nwere ọtụtụ ụgbọ mmiri na-abanye n'ụgbọ mmiri.
N'ihi ọnọdụ ihu igwe nke dị n'ọdọ mmiri a, ihe kachasị mma bụ na n'etiti ọnwa Disemba ruo Eprel, ọdọ ahụ ajụla oyi. Nke a mere ka mmiri ya ghara ịgafe n’oge a. Imirikiti azụmaahịa ndị chọrọ ụgbọ mmiri gafee ọdọ mmiri akwụsịla ọrụ ha.
Ọzọ nke Osimiri Ukwu nke North America. Ndị gbara ya gburugburu bụ Illinois, Indiana, Michigan, na Wisconsin. Ọ dị na United States kpamkpam ma nwee mpaghara square kilomita 57.750. Ogologo omimi dị mita 85 na nke kachasị elu bụ 281 mita. A na-ahụta ya bụ ọdọ mmiri nke ise kachasị ukwuu n'ụwa. O nwere oke osimiri mara na United States maka inwe aja di oke iche na ndi ozo. Nke a bụ n'ihi na ha nwere ọdịnaya quartz dị elu ma ọ na-ada ụda mgbe ị na-agafe na ya.
Ọdọ mmiri Baikal
El ọdọ baikal Ọ bụ otu n’ime ndị kacha ibu na Siberia. A makwaara ya maka no, bre de Ojo azul. Ogologo ya bụ kilomita 5539 na ọ bụ otu n'ime ọdọ mmiri kachasị doo anya na ụwa. Ọ nwere oke ntakịrị ọgba aghara. Ejiri ya UNESCO dị ka Ihe Nketa Worldwa na 1996 ma nwee obosara square kilomita 21.494. Ogologo omimi dị mita 744 na nke kachasị elu bụ mita 1642. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị omimi karịa Oké Osimiri Caspian.
Ọ bụ ọdọ mmiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu na Eshia na otu n’ime ime mmiri dị n’ụwa. O nwere ụdị algae karịrị 233 na ihe karịrị ụdị 852 nke ahịhịa na ahịhịa.
Ọ bụ otu n'ime ọdọ mmiri kachasị ukwuu n'Africa. Ọ nwere omimi nke 570 mita na nkezi na oke omimi nke mita 1470. A na-ahụta ya ọdọ nke abụọ kachasị mmi emi na ụwa. O nwere ụdị azụ dị iche iche nke azụ na ụdị ahịhịa na anụmanụ ndị ọzọ na -emepụta ọtụtụ ọrụ ruru 45.000. Ọ dị n'etiti mba Tanzania, Burundi, Democratic Republic of Congo na Zambia.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọdọ mmiri ndị kacha ibu n'ụwa. Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọdọ mmiri ndị miri emi na ala nke yiri ezigbo mmiri. Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ ịga ụfọdụ n'ime ebe ndị a mara mma ma dị ebube.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nnukwu ọdọ mmiri dị n’ụwa